1. All products and services – after clicking 'Order Confirm' on page and receivedasuccess order email – will be considered as Date of Sold.
ကုန်ပစ္စည်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို Page တငွ် 'Order Confirm' ခလုပ်နှိပ်ပြီး၊ Order အောင်မြင်ကြောင်း အီးမေးလ်ကိုရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်နေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
2. We currently run for Yangon Region only. So the delivery will take 1 to3days.
KMD Online Shopping သည် လောလောဆယ် Yangon Region တစ်ခုတည်းကိုသာ စတင် Run မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပို့ ဆောင်ရက် ကြာချိန်မှာ ၁ ရက် က နေ ၃ ရက်အတွင်း အ ရောက်ပို့ ပါမည်။
3. Apart from Public Holidays, items with following conditions are qualified to return within3working days and KMD Shopping will re-deliver with the same model else non-returnable without any conditions.
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များမှအပ ဝယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအကျိုးအ ကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ပါက3Working Days အတွင်းပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်မည်။ သို့ မဟုတ်ပါက မည်သည့် အ ကြောင်းကြောင့်မှ ဝယ်ယူပြီးပစ္စည်းများကို ပြန်လည်လဲလှယ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
• Items are not correct as stated on the invoice. (e.g. wrong color, wrong model).
ဘောင်ချာထဲမှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်ခဲ့ ပါက။ (ဥပမာ - အ ရောင်မှားနေခြင်း၊ ပစ္စည်းအမျိုးအမည်မှားနေခြင်း)
• Items are unboxed and/or damaged.
ပစ္စည်း၏အထုပ်အပိုးပျက်စီးပြီး ဖွင့်ဖောက်အသုံးပြုထားခြင်း။
4. A variety of payment methods are available on KMD Shopping as follows:
• Bank Deposit option is available on select location.
KMD တွင် လောလောဆယ်တွင် အောက်ပါငွေပေးချေမှု ၂ ရပ်ဖြင့် လက်ခံရောင်းချ ပေးပါသည်။
ပစ္စည်းလက်ခံရရှိမှ ငွေချေစနစ်
ဘဏ်သို့ တိုက်ရိုက်ကြို တင်ငေလွဲစနစ်
5. Confirmation and packing items for delivery
For Cash on Delivery, customer will received phone call from KMD Shopping sales team member for confirmation and start the process asap.
ပစ္စည်းပို့ ဆောင်မှု အတွက်အတည်ပြုခြင်း
ဝယ်ယူသူသည် ပစ္စည်းလက်ခံရရှိမှ ငွေပေးချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူပါက KMD Shopping မှအ ရောင်းကိုယ်စလှယ်ထံမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီး နေရပ်လိပ်စာများကို အတည်ပြုကာ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုများနှင့် အိမ် အ ရောက် ဝန်ဆောင်မှု များကို အချိန်နှင့် တ ပြေးညီဆောင်ရက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
6. Using Direct Bank Transfer method, customer can provideabank slip or receipt of transfer to KMD Shopping sales team via customersupport@kmdshopping.com. As soon as, the payment cleared on KMD Shopping Bank account, the process will start asap.
ဝယ်ယူသူသည် ဘဏ်မှကြိုတင် ငေလွဲပေးချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူပါက ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုမြန် အောင် Customer မှ ဘဏ်ငေလွဲ ဖြတ်ပိုင်းကို customersupport@kmdshopping.com သို့ ပို့ ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့ မဟုတ် KMD Shopping ဘဏ်အ ကောင့်ထဲသို့ ငေလွဲ ဝင်လာသည် နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်း အိမ် အ ရောက် ဝန်ဆောင်မှု များကို အချိန်နှင့် တ ပြေးညီဆောင်ရက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
7. Please use following communication channels for further information.
KMD ဘက်မှ ဝယ်ယူသူလိုအပ်သည်များကို ကူညီနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
• Email - customersupport@kmdshopping.com
• Telephone Number - 01-385077
Yangon (မြို့ နယ်)
၁ ကျောက်တံတား မြို့ နယ် 1,000
၂ လမ်းမ တော် မြို့နယ် 1,500
၃ ပန်းပဲတန်း မြို့ နယ် 1,500
၄ လသာ မြို့ နယ် 1,500
၅ ဗိုလ်တစ်ထောင် မြို့ နယ် 1,500
၆ ဒဂုံ မြို့ နယ် 1,500
၇ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့ နယ် 1,500
၈ ပုစွန်တောင် မြို့့နယ် 2,000
၉ ဗဟန်း မြို့ နယ် (ဦးချစ်မောင်)/ ရွှေဂုံတိုင် 2,500
၁၀ ဒေါပုံ မြို့ နယ် 2,000
၁၁ တာမွေမြို့ နယ် 2,500
၁၂ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့ နယ် 3,000
၁၃ အလုံ မြို့ နယ် 2,000
၁၄ စမ်းချောင်း မြို့ နယ် 2,500
၁၅ ကြည့်မြင်တိုင် မြို့ နယ် 2,500
၁၆ ကမာရွတ် မြို့ နယ် 3,000
၁၇ လှိုင် မြို့ နယ် 3,000
၁၈ မရမ်းကုန်း မြို့ နယ် 4,000
၁၉ အင်းစိန် မြို့ နယ် 5,000
၂၀ အောင်ဆန်း/ရွာမ 7,000/6,000
၂၁ သုဝဏ္ဏ 2,500
၂၂ သာကေတ မြို့ နယ် 2,500
၂၃ ရန်ကင်း မြို့ နယ် 2,500
၂၄ ဘောက်ထော် 2,500
၂၅ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့ နယ် 3,000
၂၆ မြောက်ဥက္ကလာ မြို့ နယ် 4,500
၂၇ ရွှေပြည်သာ မြို့ နယ် 8,000
၂၈ လှိုင်သာယာ မြို့ နယ် 8,000
၂၉ မင်္ဂလာဒုံ မြို့ နယ်/ ပုလဲ 6,000/7,000
၃၀ ဒဂုံဆိတ်ကမ်း မြို့ နယ် 5,000
၃၁ ဒဂုံအ ရှေ့ မြို့ နယ် 5,000
၃၂ ဒဂုံတောင် မြို့ နယ် 5,000
၃၃ ဒဂုံမြောက် မြို့ နယ်/ ၇၊၈ လမ်းဆုံအတွင်း 6,000/5,000